Jeequmsa Oromiyaa dhihaa
Map of OromiaBirdhuun waraanaan dhufuu fi goolii jala jiraachuun waggoota hedduu dhufaniif salphaatt sammuu ummataa keessaa bahuu hin dandahamu. Akka waldhabdichi dheerataa deemeen kurnoota dheeraa as deemaniif sammuuquwii fi diinagdee irratt badiisaa guddaa geessisuu dandaha. Ummata ajjeesaa fi ciiga’aa siif dhaabbanna jechuu fakkeesitummaa dha.
Waant si’a amma konyaa Qellemitt taha jiru kan achitt dhalatee hafee ilmoo namaa kamiifuu kan garaa kan nyaatu. Karaa fi waabariitu cufame; diinagaddeen kufee, amanamummaan ummatichaa gara hundaan dirqamsiifamaa jira; lubbuunis badaa, gooliin biyya fudhataa jira. Waldhabdeen hanga dheerataa deemett badiisi inni sammuquyii fi diinagdee irratt kurnoota hedduu dhufaniif qabatu hammaa bahaa taha. Sanneen, gidiraa kaaba, bahaa fi kibbaa hanga yoonaa nu laalessaa jiran irratt dabalamee goodaannis hin dhin’ne seexaa keenya irratt dhiisee darba.
Ummata hojii fi iggitii hawaasomaa hin qabneef waraanni furmaata hin tahu. Lola maaljecha hin qabne. Maqaan jaarmota Oromoo kanaan dhahamuun waan nama gaddisiisu. Diinoti Oromoo dudhaa fi ayyaanlaallattoo duubatt harkiftooti akka lolichii ho’u dibbee lolaa dillisaa jiru. Waabarii cufuu jechuun dhaloota barataa tokkoo fi akaakuu barnootaa dhabuu jechuu dha. Dudhaan Oromoo kaaraan qixxee gabaan Odaan qixxeejedha jedha. Karaan kan waloo waan tahaniif cufamuu hin qaban. Gabaan eenyuufuu dhowwamuu hin qabu; mariin hundaaf banaa tahuu qabu.
Haalli si’anaa akeeka sana hunda gatii dhabsiisu. Dargaggoo dhaloota qubeef haa galatu qabsoon Oromo gara sirna demookrasii naga qabeessatt cehuuf tuqaa olhaanaa irra gahe jira. Burjaajiin sana hin gargaaruu. Ofiin of burjaajessanii carraa argame kana dabarsuun ofumatt diina tahuutt ilaalama. Kaayyoo sabichaaf hankaaksituu tahuu dha. Kanneen dirree fi manyaa gama jiraaatan cehumsa kana deggeruun waraana , cunqursaa fi hacuuccaa diinaa jaarraa olii raawwachiisuutt walii galanii kan biyyatt dacha’an fakkaatu. Sun kan labsame jijjiirama dura taahaa ODP Doktor Abiyi Ahimediin hogganamu fudhachuunii. Hamma yoona sana waanti nama gaabbisiisu hin mullanne.
ODP fi dhaabota Oromoo biraa gidduu, hanga olhaantummaa seeraa gara hundaan fudhatame fi Oromoon kanneen biraa irraa addatt it thin loogamnett waanti wal lolchiisu hin jiru. Ummati hamaa ofirraa akka ittisu hidhachiisuu fi golli tokko hidhachuun eenyuufuu wal dhahuu hin qabu. Nambiyyaan hidhannoo qabaachuun dhimma seeraa yk afaan tokkoon murteessa sabummaatii. Nagaan yoo hin jiraanne ergamsi cehumsichaa ni jeeqama. Kanaaf lolli Oromiyaa lixaatt gaggeeffamaa jiru haala duree tokko malee dhaabbatee waldhabdeen furmaata argachuu qaba. Shaneen gumii fedhaan haa tahu utuu hin fedhin dhaddhaqii waldhabdee keessa seenee shafisa dandahameen keessaa of baasee araara buusuu qaba. Kanneen gara qabachuun lolichatt afarsaa jiran badiisa ummatichaatt gumaachaa akka jiran beekuu qabu. Kanaaf dhaabbatanii maalitt gumaachaa akka jiran of gaafachuu qabu.
Hobbaatiin lolichaa lachanuufuu hoodaan yk qaamaan hubamuutt geessa. Isaan keessaa kan injifannoon bahu hin jiraatu. Lola utubuun hamtummaa dha; irraa qoollifachuun eebbifamaa taha. Dhuma irratt yeroo diinoti keenya utuu hin dafqinii fi itti hin dhiigin badhaasa argatan, nuwi Oromoo qofatu hongaatuu taana. Kun dhaabii ummatoota bilisummaaf qabsaawaniitt qaanii guddaa dha.